Muxuu sameeyay Al Baqdaadi isbuucyadii ugu dambeysay ee noloshiisa - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
Muxuu sameeyay Al Baqdaadi isbuucyadii ugu dambeysay ee noloshiisa
November 7, 2019 at 15:37 Muxuu sameeyay Al Baqdaadi isbuucyadii ugu dambeysay ee noloshiisa2019-11-07T15:37:02+01:00 WARARKA SOOMAALIYA
Maxaa ku dhacay Baqdaadi?
Muuqaalka howlgalka ayay ciidamada Mareykanka shaaciyeen maalmo ka dib. Waa mid aan si nadiif ah loo arkin, waxaa ka dhex muuqda diyaaradaha qumaatiga u kaca oo rasaas ku ridaya rag hubeysan oo dhulka ku sugnaa una sii cararayay dhanka dhismaha uu AL Baqdaadi ku dhuumanayay.
Markii ay ciidanka dhulka ku degeen, waxay qarxiyeen qeybo ka mid ah guriga si ay u duleeliyaan, waxayna Al Baqdaadi u sheegeen in uu is dhiibo, sida ay saraakiisha Mareykanka sheegteen. Laakiin wuxuu ku cararay kanaal, wuxuuna qarxiyay jaakad u xirnayd. Waxaa la dhimatay laba carruur ah oo la socotay.
Mr Trump wuxuu sheegay in tijaabo laga qaaday dhiigga huda sidaha (DNA) lagu xaqiijiyay in qofka dhintay uu yahay Al Baqdaadi.
Howlgalka ka dib, dhismaha oo dhan ayaa la burburiyay.
Abu Ibrahim al-Hashemi al-Qureyshi ayaa ka dib loo magacaabay in uu noqdo hoggaamiyaha ururka la baxay Khilaafada Islaamka.
« US calls for dialogue in resolving political disputes in Somalia
RASMI: Liiska Xulka England Ee Isreeb-Reebka Euro 2020 Oo Lasoo Saaray, Xiddigo Man United & Tottenham Ah Oo Laga Reebay & Chamberlain Oo Soo laabtay. »